Podcast uye Apple Music zvakanyatsobatanidzwa muPorsche Taycan | Ndinobva mac
Podcast neApple Music zvine mutsindo zvinobatanidzwa muPorsche Taycan
Manuel Alonso | | Apple Music, dzakawanda
Hatimbofi takakwanisa kunakidzwa nekutyaira iyo Porsche Taycan, chiitiko chemagetsi cheGerman nesimba rese uye hukasira hwemotokari. Asi isu tiri pano kuti ndikuzivisei nhau kubva kuApple uye imwe yacho ine hukama neApple Music, Podcasts uye mota. Gore rapera, marongerwo maviri akabatana kubatanidza Apple Music kutenderera yakananga muPorsche Taycan, yekutanga yakazara magetsi Porsche. Zvino, yakagadziridzwa uye tsamba dzese masevhisi dzinoratidzwa pachiratidziro chemotokari.
Mugadziri weGerman uye Apple vari kuwedzera kubatana kuti vaunze matsva kuPorsche Taycan. Iyo nyowani ficha ine mazwi akawiriraniswa munguva chaiyo mukati meApple Music ikozvino ichave ichioneka pane yevatakuri skrini yemota. Iyo yakasarudzika ruzivo mukati mePorsche Taycan mota yemagetsi inoenderera mberi nekumhanyisa zvemukati sezvatakambojaira kuona neCarPlay, iyo zvakare isingape mutyairi-centric chiitiko chekutsigira kuratidzwa kweanowirirana mavara.
Apple Podcasts zvakare inosangana zvakananga neiyo infotainment system. Account account yakabatana neApple mutyairi ID yeApple Music uye Apple Podcasts. Mimhanzi episode uye podcast zvinogona kutenderedzwa kunyangwe pasina kubatanidza iyo iPhone kune infotainment system. Mumashoko aOliver Schusser, Mutevedzeri weMutungamiriri weApple Music, Beats uye Zvemukati Zvemukati:
Podcast yakanaka inogona kuita chero rwendo kunakidzwa. NeApple Podcasts, madhiraivha anogona kubata zvisina basa. Nhau dzichangoburwa, inzwa nyaya dzisinganzwisisike, uye unakirwe nekambani yewaunofarira makamu Uye neApple Music, vafambi vanogona kuimba zviri nyore pamwe chete nenziyo dzavanofarira nadzo Nguva-Yakawiriraniswa Rwiyo.
Ndiri kutarisira kuyedza, asi zvinoratidzika kwandiri kuti ndichafanirwa kugadzirisa mavhidhiyo anobuda mu Youtube kana kubva kune chero muridzi muridzi wePorsche Taycan.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Podcast neApple Music zvine mutsindo zvinobatanidzwa muPorsche Taycan
BioShock 2 Remastered ikozvino yawanikwa ye macOS
Maererano naProsser; Chiitiko cheApple munaKurume 2021: AirPods Studio